Archive du 06-nov-2020
Fampirafesana voaporofo Miara-migadra ny vady sy ny rafy
Bonjour Jejoo, tratrako nampirafy ny vadiko. Efa noteneniko izy tany am-boalohany saingy mbola mamerina ihany. Nisy fotoana tena tratrako mihitsy izy roa. Te hitory anilay vehivavy aho. Azoko atao ve izany?
Fomba fitahirizana pasteky, atody, champagne,
Pasteky: rarahana tain-dabozia manodidina azy. Atody: atao anaty bocal misy sira
Manala volon-tongotra aminny « cire » vita ao an-trano
Fanontaniana manitikitika avy aminny mpamaky Jejoo ity ho valianny matihanina anio ity, izay miompana indrindra aminny fanesorana ny volon-tongotra. « Inona no re no fomba azo atao hanesorana ny volon-tongotra ,fa manelingelina ny maso izy ireo, nefa sarotra ihany koa ny manala azy ? ».
ZOMA Plaza Ampefiloha miaraka amini Bodo
Satria..Tia Fotsiny i Bodo ka hanolotra fotoana mamy miaraka aminireo mpankafy azy anio hariva etsy aminny Plaza Ampefiloha manomboka aminny 7 ora sy sasany.
Karavato toy ny ahoana no hanaovana ?
Rahoviana no tokony hanao karavato na « cravate » ? Misy karazany koa ny karavato ka ilaina mba mifanaraka aminny fiakanjo izy ireny.
Nisaraka izaho sy ny vadiko ka miaraka aminolon-kafa aho,
izay mifanampy amiko aminny fiainana. Nisy antony nahatezitra azy tamiko anefa, ka tsy te hiaraka aminy intsony aho.
Joe Biden, ilay ho filoha amerikanina Efa namoy vady sy zanaka tamina accident
Notanterahina ny 3 novambra lasa teo ny fifidianana ho filoham-pirenena any Etazonia. Hisolo toerana ani Donald Trump ny kandida Joe Biden. Kandida efa ampy traikefa izy satria 77 taona izao ity filoha vaovao ity ary manana ny tantarany, somary mavesatra ihany.
ho anny zaza maniry nify
Satria mbola tsy tena nahenika ani Madagasikara ny fitsaboana avy any ivelany fahiny dia nampiasa ny fombany ihany koa ireo olonny ntaolo, aminny fampitoniana ny hidihidinny fanirianny nifinny zazakely. Bokotra sy volonosy ohatra no nampiasinizy ireo.
Satro-boninahitra - Ranavalona III Notsenaina taminny fomba hafakely
Nigadona tetsy aminny seranam-piaramanidina Ivato omaly maraina taminny 9 ora 30 ny fiaramanidin'ny Air France, nitondra ilay satro-boninahitry ny Tatarom-piandrianan'ny Mpanjaka Ranavalona faha III.
1. Foie gras  25.000Ar/ 250g  12.000Ar/ 100g - « 2 pots achetés = 1 pot offert » - Cooking Live Contact : 034 86 534 80
« Tagliatelles » kôrzety : Manatsara fandevonan-kanina
Manankarena voankazo sy legioma ara-pahasalamana isika ka tsara raha araraotina ny fihinanana azy ireny.
RTOA ASSANATI Nanampy ny mpanao gazety
Ho tohin'ny hetsika nataon'ny Fikambanana Assanati Famo gidraka tao Mahajanga nentina nanampiana ireo mpanankato marobe tany an-toerana dia nizara fanampiana ho an'ireo mpanao gazety tsy an-kanavaka tany an.toerana indray ny fikambanana afakomaly 04 Novambra,
International Gastronomie Pizza Nahazo ozinina vaovao manara-penitra
Nahazo ozinina fanodinana sakafo manara-penitra ny vondrona International Gastronomie Pizza, tantananny sefo Mbinina. Omaly no notokanana tamim-pomba ôfisialy io ozinina io, orinasa fahaenina natsanganny IGP hamatsy ny tsena anatiny mifanaraka aminny filanny mponina ankoatra ny fikasana hanondrana any ivelany ihany koa.
Tetikasa IVR : ho fampiofanana avy lavitra, ireo mpiasanny fahasalamana
Hisitraka fampiofanana ampitain-davatra ireo tomponandraikitra sy mpiantsehatra eny anivonny fiarahamonina manodidina ny 5.000 ao anatinny faritra Analanjirofo, Boeny, Diana, Menabe, Melaky sy Sofia ary SAVA.
Ambavahadimitafo : Trano efa tsisy nipetraka no may
Trano iray efa tsy nisy nipetraka intsony teny Ambavahadimitafo no nirehitra omaly tolakandro tokony ho taminny 1 ora teo. Rah any fantatra dia court circuit no nahatonga ny fahamaizana.
« Feonny Simpona » Fandaharanny WWF, miaro ny Simpona
Mba hiadiana amin'ny faharinganan'ny Simpona, izay varika efa vitsy ary tsy hita afa-tsy any amin'ny faritra avatry ny Nosy dia namokatra andiana fandaharana « Feonny Simpona » ny WWF.
Zazavavy kely miisa 3 indray no naolanny tovolahy iray 28 taona teny aminny faritra Androndrakely. Raha ny fitantaran'ireo ankizy ; araka ny filazan'ireo Ray aman-dreniny, dia notambazanilay lehilahy vola ireo ankizy,
Artista ao Vakinakaratra Voafidy ho filoha i Didi Alpha
Tanteraka taminity herinandro ity ny fifidianana izay ho filohanny artista any aminny faritra Vakinakaratra. Mpanakanto 48 aminireo 100 nisoratra anarana, no tonga nifidy taminizany,
Vaksiny Covid-19 Mety tsy handaitra aminireo olona matavy
Mety tsy handaitra aminireo olona matavy sy be vatana ny vaksininny covid-19, raha ny voka-pikarohana natao tany Lille-Frantsa. Ny antony dia satria tsy miasa ara-dalàna na kamokamo ny hery fiarovana voajanahary anatinny vatanireo olombelona somary matavy.
MANAKARA Tafajoro ny fikambananireo vehivavy mpandraharaha EFOI
Tafatsangana amim-pomba ofisialy ny tendronny vehivavy mpandraharaha ao aminny faritra Vatovavy Fitovinany na ny EFOI V7V.
« Interactive Voice Response » Teknolojia manofana ireo mpisehatra ara-tsosialy
Tontosa ny alarobia teo ny fampahafantarana ny fampiasana ny « Réponse Vocale Interactive na IVR (Interactive Voice Response) » aminny alàlanny finday.
Lucie, mpianatry ny Lisea Nariany velona tao anaty WC ny zanany
Voasambotry ny zandary ao Tsarahonenana Sahanivotry any Antsirabe faharoa ny tovovavy mpianatra iray, izay nanary ny zanany vao teraka tao anaty lava-piringa ka nahafaty azy.